महान गाइडमा बहुभाषी उपकरण हाम्रो सम्पादकीय विभागको विशेष
सुरु आफैलाई उपकरण multifunction उपकरण
das multifunction उपकरण घर सुधारको लागि।
घर सुधार क्षेत्रको काम, जस्तै कि भिसा, पीस र पोलिश जस्ता कामहरू सधैँ केहि कुशलता र विभिन्न उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ। यकिन गर्नुहोस् कि तपाइँ साना गतिविधिहरूको लागि धेरै उपकरणहरूको आवश्यकता छैन, धेरै विक्रेन्डर्सहरू बहुविध उपकरणहरू निर्माण गर्दैछन्, जुन विभिन्न निबन्धहरूको मद्दतले यी हस्तकला गतिविधिहरू गर्न सक्दछ।
1 बहु-प्रकार्य उपकरण के हो?
2 बहुविध उपकरणको प्रकार
2.1 वायर्ड बहुउपकरण
2.2 ताररहित बहुफार्मिक उपकरणहरू
3 बहुउपकरणको लागि खरिद मापदण्ड
10 प्रमुख ब्रान्डहरु
12 सुरक्षा पन्जा
13 आँखा सुरक्षा
14 श्वसन सुरक्षा
15 सुनेपछि सुरक्षा
16 सुरक्षा हेलमेट
17 थप सुरक्षा निर्देशनहरू
बहु-प्रकार्य उपकरण के हो?
एक बहु-प्रकार्य उपकरण, जसले बहुविधको रूपमा चिनिन्छ, एक बहुमुखी उपकरण हो जुन अक्सर शौकिया र व्यावसायिक शिल्पकारहरूले प्रयोग गरिन्छ। यी उपकरणहरू ओस्लिलिङ गर्दै छन्, यसरी multitool oscillating, र Dremel संग तुलनात्मक। तिनीहरू शिल्प क्षेत्रको विभिन्न उपकरणहरू एक उपकरणमा समायोजन गर्छन्, जस्तै मिलिंग, रसिंग, काटन, पोलिश, अनुहार र पीसिंग। यी धेरै सम्भावनाहरूको कारण, एक बहुमुखी उपकरण यसैले एक सत्य बहुसंख्यक र एक सानो र सजिलो सहायक कार्यको लागि काममा वा घरमा रोजगारीको प्रयोगको लागि हो। मल्टिटूलहरू प्रयोग गरिन्छ जब यो राम्ररी काम गर्न आवश्यक छ र सामान्य बिजुली उपकरणहरू, जस्तै थरथरानवाला चिनो वा एक jigsaw को रूपमा कुनै पनि ठाउँ छैन। कील टाउकोको द्रुत काट्ने बन्दुक जस्तै, चिपकने स्क्रैपिंग, सम्बन्धित क्यान्सर पीस, टाइल जोड्ने को उद्घाटन र टाइल हटाउने, यी औजारहरु आदर्श रुपमा अनुकूल हुन्छन्। धातु, प्लास्टिक वा काठको रूपमा कच्चा मालहरू देख्ने सम्भावना धेरैले सम्भव छ जुन मल्टीटूलको विशेष पत्रहरू। पारंपरिक यन्त्रहरूको विपरीत, बहुउपकरण उपकरणहरू फरक ढंगले डिजाइन गरिएका छन्, किनकि बहुटूल घुमाउँदैन तर थरथरान गर्दछ। यस अवस्थामा, निष्क्रिय गति कम्तीमा माथि 20.000 थम्बनेल प्रति मिनेट र थम्बनेलको कोणमा तीन डिग्री सम्म हुन्छ। बहुउपकरण उपकरणहरूको विभिन्न प्रकार्यहरूका लागि, सम्बन्धित अनुलग्नकहरू प्रयोग गरिन्छ, जुन बोस्ट र अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले सहायक उपकरणको रूपमा आपूर्ति गर्दछ।
बहुविध उपकरणको प्रकार
बहुटूलहरू मुख्य रूपमा नेटवर्क र ब्याट्री संचालित उपकरणहरू बीच भिन्न हुन्छन्। मतभेद र दुई बहुविध उपकरण प्रकारका फायदेहरू र हानिहरू तल वर्णन गरिएका छन्।
केबल-जोडिएको बहुफार्मिक उपकरणहरू पावर केबलद्वारा संचालित हुन्छन्। यसले धेरै उच्च प्रदर्शनमा परिणाम गर्दछ। फलस्वरूप, ठूला कार्यहरू, जस्तै काठ र अन्य सामग्री काटेर, सहज रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यी मल्टीटूलहरू स्थायी अपरेसनमा पनि विश्वस्त छन्, किनभने यहाँ हाल कुनै पनि समयमा समाप्त हुँदैन। केवल यी उपकरणहरूसँग पावर केबल हो, जुन सँधै जडित वा सम्भवतया राखिएको छ। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि केबल छेउमा खाली र सुरक्षित हुन्छ जब बहु बहु प्रकार्य प्रकारको साथ काम गर्ने काम गर्दछ।
ताररहित बहुफार्मिक उपकरणहरू
ब्याट्रि-संचालित multitools एकीकृत बैटरी को माध्यम ले पावर पाउँछ, किनकि नाम पहिले नै betrays। सामान्य अवस्थामा एकले 18 वाल्ट लिथियम-आयन ब्याट्री प्रयोग गर्दछ, जसको कम्तिमा चार एम्पेर-घण्टाको क्षमता छ। यी बहु-प्रकार्य उपकरणहरू अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदैछन् किनभने तिनीहरू केबल-संचालित बहुउल्टहरू मा सुविधाजनक फाइदाहरू प्रदान गर्छन्। तिनीहरू पावर केबल जडान बिना तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पनि कामलाई सरल बनाउँछ, किनभने कुनै केबुलहरूको सम्मान गर्न सकिँदैन। कुनै पनि समस्या बिना ब्याट्री बहुउद्देश्य उपकरण ट्रांसपोर्ट गर्न सम्भव छ, उदाहरणका लागि, एक कोठाबाट अर्कोबाट, किनकि यी मल्टीटूलहरू अझ लचीला छन्। यी उपकरणहरूको सीमित ब्याट्री प्रदर्शनको कारण, सम्भावनाहरू सीमित छन्। सानो गतिविधिहरूको लागि, किक्रोचिंग, पोलिश र पीसने आदीधिक multitools विशेष रूप देखि उपयुक्त छ। यदि त्यहाँ ठूला ठूला कार्यहरू आवश्यक छन् भने अधिक शक्ति चाहिन्छ, जस्तै धातु काटेर वा काट्ने, समस्याहरू छन् किनभने ब्याट्रीको दायरा चाँडै यस दृष्टिकोणमा पुग्यो। केबल केबल बहु गुणक यसको लागि उपयुक्त छ। एक रोटरी हथौडा बहुउपकरण उपकरण बदल्न सक्दैन।
बहुउपकरणको लागि खरिद मापदण्ड
निम्न खण्डले बहु बहुविध उपकरण खरिद गर्ने बिन्दुहरूलाई विचार गर्न वर्णन गर्दछ।
बहु-प्रकार्य उपकरणको लागि, प्रदर्शन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ ब्रान्ड निर्माताहरू छन्, जसले 300 बाट 350 वाटबाट उच्च प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। अन्य प्रदायक र संस्करणहरूमा 190 र 250 वाट बीचको कम वाट्याट छ, जुन सानो घर गतिविधिहरूको लागि उपयुक्त छ। वाट प्रदर्शनमा यी उपकरणहरूको ताप तापनि के बिर्सनु हुँदैन? यो कम भटका साथ धेरै छिटो छ र यस प्रकार अप्रिय अपरेशन। शक्तिको अर्को विशेषता निष्क्रिय गति हो, जुन इन्जिनबाट प्रति मिनेट घुमाउँछ। त्यो, एक multitool को निष्क्रिय गति उच्च, उच्च शक्ति। यहाँ, 10.000 देखि 19.500 प्रतिमा प्रति मिनेट बाट एक दिशानिर्देशबाट सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, हालको स्रोत यस्तो उपकरणको प्रदर्शनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो सूचकांकहरू दिइन्छ भने, यो बहुविध टाइलमा जोडहरू को हटाउन सम्बन्धित बहुउत्र प्रयोग गर्न सम्भव छ।
सिद्धान्तमा, एक बहुमुखी उपकरण उपयुक्त सहायक उपकरणहरूसँग सुसज्जित छ, जुन सम्भव प्रयोगहरूको दायरा पनि समावेश गर्दछ। यसका बावजूद, उपकरणहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि इच्छित अनुप्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। यदि आवश्यक भएमा, मल्टीइटूलहरूको लागि सामानहरू सँधै खरीद गर्न सकिन्छ, तर मूल्य वर्गको लागि योग्य हुनुपर्छ। बहुमुखी उपकरणहरूले विभिन्न प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै एक कुशन उपकरण वा छिटो रिलीज प्रणाली। एक द्रुत-रिलीज प्रणाली एलेन कुञ्जी वा रिन्च बिना एउटा संलग्नक प्रतिस्थापन गर्दछ। यो एक आरामदायक संभालमा परिणाम, समय र सम्भावित तंत्रिका बचत गर्दछ। टाइल हटाउनका लागि गतिविधिहरूका लागि, विशेषरुपमा सक्शन यन्त्र उपयुक्त छ, किनभने त्यहाँ धेरै गहिरो र धूल छ। यस उपकरणको साथ, एक वैक्यूम क्लीनर बहुटूलमा जडान गर्न सकिन्छ। यो परिणामस्वरूप गहिराइ र धूलको लागि समाधान हो। स्वास्थ्यको कारणको लागि एक निकासी यन्त्रलाई पनि सल्लाह दिइएको छ, ताकि धूल र अरुले भत्काउनु हुँदैन। मल्टिटूल आपूर्ति गरिएको मामलामा राखिएको छ। धेरै विक्रेटरहरूले बहुविध उपकरणहरू मिल्दो सूटकेसहरूमा जहाजमा राख्छन्, जसले सामानहरू पनि समावेश गर्दछ। सूटकेस यस्तो आवृत्ति उपकरणको लागि आवश्यक छ।
बहु-प्रकार्य उपकरणसँग काम गर्दा, यो कुनै पनि परेशानी बिना आराम र स्थायी हुनुपर्छ। यी उपकरणहरूसँग सजिलो कामको लागि, सरल र सजिलो सम्भावना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो एक हर्जोसँग सुरु हुन्छ जुन ergonomically आकार र राम्रोसँग मेल खाने शक्ति हो। बहुउल्टहरूको अवस्थामा, कार्यात्मक बटनहरू छिट्टै र सजिलै सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यो उपकरण परिवर्तनको प्रकारमा ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँले clamping प्रणाली मार्फत कुनै उपकरण बिना अनुलग्नकहरू परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाई धेरै समय बचत गर्नुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, यो एक सामान्यतया अधिक सहज संभाल सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि, यदि तपाईंलाई एल्सन रिंच वा संलग्नक परिवर्तन गर्नका लागि उपकरणहरू चाहिन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण लामो समय लाग्छ। हैंडलिंग को वजन लागि, यो धेरै वजन मा किनभने स्थायी सञ्चालनको एक प्रयोगकर्ता-अनुकूल वजन गर्न ध्यान थकित हुन सक्छ कि आवश्यक छ।
मल्टिटूलको अवस्थामा, वजन पनि प्रासंगिक छ किनकी उपकरणहरू हातमा स्थायी रूपमा आयोजित हुन्छन् र यसैले लोडको रूपमा कमको रूपमा कम हुनुपर्छ। सुखद कामको लागी, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरु कुनै पनि सजिलो छैन। 1,2 र 1,5 किलोग्राम बीच औसतमा बहुविध उपकरणहरू वजन।
तथापि कुन बहुविध उपकरणको लागत छ, तथापि, सिद्धान्तमा जवाफ दिन सकिँदैन। बरु, यो कुन गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे जान्न महत्त्वपूर्ण छ। एक त तपाईं आवश्यक भन्दा महंगी विकल्प किन्न छैन, केवल केही अवस्थामा नयाँ multitool प्रयोग गर्न योजना भने, तर यो बीचमा मूल्य दायरामा एकदम राम्रो छ। यो शौकिया hobbyist को लागि एङ्गलर सम्म उपयुक्त छ। यो तथापि, अक्सर अप धेरै पटक एक दिन प्रयोग गरिन्छ गर्नुपर्छ र गतिविधिहरूको लगभग सबै प्रकार प्रदर्शन गर्न सक्छन्, यो तपाईं उच्च गुणवत्ता को हो भनेर सामान संग एक multifunction उपकरण लगानी गर्ने निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। माथिल्लो मूल्य दायरामा मल्टीटूल शिल्पकार वा भावुक DIY उत्साहका लागि सिफारिश गरिएको छ। यो सम्राजहरू उत्कृष्ट गुणस्तरका साथ, उच्च गुणस्तरको प्रविधि हो र कार्यहरूको विस्तृत दायरा र सामानहरू पनि छन्। यो उपकरण नियमित रूपमा धेरै वर्षहरूमा नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सम्भव छ।
त्यहाँ धेरै विक्रेन्डहरू छन् जसबाट बहुविध उपकरण उपलब्ध छन्:
काला र डेकर
मल्टीइटूल प्रस्ताव गर्ने तीन प्रमुख निर्माताहरू तल विस्तृत छन्।
Makita Werkzeug GmbH, जो मूल्याङ्कन मा आधारित छ, धेरै बिजुली उपकरणहरु को बीच मल्टीइटूल को पेशकश गर्दछ। यस कम्पनीको साथ, उत्पादन दायरा स्पष्ट र धेरै सानो छ। उच्च प्रदर्शन सञ्जाल मशीनहरू र रिचार्जयोग्य ब्याट्रीहरू एक व्यापक दायराको साथ सामानको निर्माण गरिन्छ। मक्काबाट पेशेवर बहुभाषी उपकरण भावुक DIY र शिल्पकारहरूका लागि उपयुक्त छन्। विशेष गरी यस्तो Makita एकाइहरु को Makita DTM51Y1JX8 गुणस्तर रूपमा ताररहित बहु उपकरण संग जो केवल एकीकृत उच्च प्रदर्शन ब्याट्री परस्पर छन् कि छैन, उपलब्ध छन्। सिद्धान्तमा, मेटा उपकरणहरूले प्रयोगकर्ता मित्रता र गुणस्तरमा उच्च मागहरू पूरा गर्छन्। यसको अतिरिक्त, यो कम्पनी प्रयोगकर्ता-अनुकूल मामला प्रणाली प्रदान गर्दछ जसले MAKPAC भनिन्छ, जसले बहुविध उपकरणहरू सहित सजिलै र सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न र ट्रान्सफर गर्न अनुमति दिन्छ। मानक डिलिवरीमा सँधै सामानको एक विस्तृत दायरा समावेश छ, सबै आवश्यकताहरु लाई छोडिदिन्छ ताकि काम सही हुन सक्छ। मकिता बहुभाषिक उपकरणको खरीदको समयमा तपाईले 41 सहायक सेट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मकिता ब्याट्री बहुप्राप्ति उपकरण (ब्याट्रि बिना / चार्जर, एक्सएनएमएक्स डब्लू, एक्सएनमक्स V) डीटीएमक्सएनमक्सZ संकेतक
इलेक्ट्रोनिक समायोज्य थम्बनेल संख्या
सम्मिलित उपकरणहरूको उपकरण-रहित परिवर्तन
अवलोकन, काटन र पीसिंगको लागि बहुउत्पादन उपकरण
विस्तृत उपकरणहरुको लागि विस्तृत उपकरण को वैकल्पिक रूप देखि उपलब्ध छ
नरम सुरुवात र पुनःसुरु संरक्षणको साथ
एक सफल उत्पादन समूहको रूपमा, गेर्लिंग कम्पनी बोस्चले मल्टीटूल बनाउँछ। सिद्धान्तमा, बोसबाट बहुउद्देश्य उपकरणहरू उत्कृष्ट रूपमा प्रशोधन गरिएका छन् र उच्च गुणस्तरको। यसको अतिरिक्त, कम्पनीले एक व्यापक उत्पाद दायरा र विशेष गरी राम्रो ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ। विभिन्न बहुउल्टहरूको ठूलो छनोटमा, नीलो र हरियो उत्पादन लाइनको बीच एक भेद बनाइन्छ। नीलो उपकरणहरू शिल्पकारहरूका लागि उपलब्ध छन्, जबकि हरियो DIY उत्साहका लागि उद्देश्य हो। बोस्चसँग पनि प्रस्तावमा केबल र ब्याट्री संचालित बहुभाषी उपकरण छ। फिर्ता नीलो लाइन GOP 300 SCE multitool गर्न डेटिङ हाल कम्पनीको स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ उपकरण हो। L-BOXX जस्ता सामान प्रणाली, विशेष रूपमा सहज र ग्राहक-आधारित हुन्छन्। बक्स प्रणालीको कारण, मल्टीटूलसँग सङ्ग्रह गर्न र सामानहरूसँग मिलाउन सम्भव छ। अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि, बोसले यी उपकरणहरूको लागि उच्च गुणस्तर र व्यापक दायरा प्रदान गर्दछ।
बॉश मल्टीफंक्शन उपकरण पीएमएफ 250 CES सेट (250 वाट, केसमा) प्रदर्शन
बहुमुखी उपकरण PMF 250 CES सेट - अनुप्रयोगों को एक विस्तृत श्रृंखला को लागि शक्तिशाली सार्वभौमिक सहायता
धेरै सामानहरूको लागि उपयुक्त सामानहरूको लागि उपयुक्त: मिलिंग, स्क्रैपिंग, क्यानाडा, काटन, काटन, पिसाई, पोलिश
भौतिक संगत कार्यको लागि र बोस्स्ट कन्स्टन्ट्ट इलेक्ट्रोनिक्सको लागि गति preselection सँग, ताकि शक्ति धेरै लोड भरी भइरहेको छ।
सटीक र सज्जन डिपिङ गोलाकार "घुमाई-टेक" डाइविंग को किनाराहरू काटेर ब्लेडहरू देखाउँदै
वैक्यूम क्लीनर एडाप्टरको लागि 4-स्तरको गहिरो बन्दको साथ सटीक काटन गहिराई कोयम राख्नुहोस् साथै साथसाथै कम-धूल पीसिंग धन्यवाद।
बहुभाषी उपकरणहरूको लागि, कम्पनी फिन Schwäbisch Gmünd-Bargau मा अग्रणी छ। यसको विशाल ज्ञानको कारणले गर्दा, यो हाल सर्वोत्तम मल्टीटूल प्रस्ताव गर्दछ। यी उपकरणहरूले प्रयोग गरेको सामग्रीको सबै भन्दा धेरै उच्च गुणस्तरलाई समेट्न, उच्च गुणस्तर कारीगरी र शक्तिशाली प्रदर्शनको रूपमा उनीहरूले उच्च-गुणस्तर निर्मित निर्मित मोटरहरू छन्। यसैले शिल्पकारहरूले यो छनौट गर्छन्। Fein बाट उत्कृष्ट बहुउद्देश्य उपकरण मल्टीिमस्टर FMM 350 क्यू शीर्ष हो, जुन बजारमा जान सकिन्छ। Multimaster एक स्थायी कार्यको लागि पेशेवर हो। यो शिल्पकारहरु र भावुक DIY उत्साही को लागि उपयुक्त छ, जहां नियमित उपयोग संग उच्च प्रदर्शन को आवश्यकता हो। यसबाहेक, मल्टीटूलले सामानहरूको विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ, जुन विभिन्न सेटहरूमा समावेश गरिन्छ। विभिन्न सेटहरूको कारण, सबै अनुप्रयोगहरू सम्भव छन्। पेशेवर बहु-प्रकार्य उपकरणहरू को अतिरिक्त, फिन beg beginners को लागि अधिक लागत प्रभावी डिजाइन छ, जस्तै FMT 250 डब्ल्यू स्टार्ट।
ठीक बहु-उपकरण (350 वाट राम्रो उच्च प्रदर्शन इन्जिन, QuickIN तीव्र clamping सिस्टम) FMM 350 QSLAnzeige
शक्तिशाली 350 वाट उच्च प्रदर्शन मोटर
स्फूर्तिसाथ समायोज्य कम्पनेशन, ई-कटि प्रेसिजन BIM हेर्नुहोस् ब्लेड हेर्नुहोस्
तारालकप्लस उपकरण धारक, QuickIN छिटो-रिलीज प्रणाली
3 वर्ष निर्माण गारंटी
वितरण: sanding प्लेट आधारमा3sanding पानाहरू (K 60 / 80 / 120 / 180) Perforated, sanding थाली,3sanding पानाहरू (K 60 / 80 / 120 / 180) प्लेट ँ 115 मिमी पीस निर्भर Perforated, K2आधारमा 60 sanding पानाहरू (, Perforated punched / 80 / 180), चूषण, Fester स्पाटुला, ई-कट लामो-जीवन 35 मिमी देखे, विश्वव्यापी ई-कट ब्लेड देखे 44 मिमी, 1 ई-कट लामो-जीवन डाइभिङ ब्लेड 65 मिमी, HSS खण्ड ब्लेड देखे, कार्बाइड खण्ड ब्लेड, कार्बाइड देखे घिसना (त्रिकोणीय आकार), Perforated, प्लास्टिक उपकरण
त्यहाँ सधैं दुर्घटनाहरू छन्, विशेष गरी शिल्प गतिविधिहरूमा। साधारण सुरक्षा उपायहरू पालन गरेर, बहुविध उपकरणहरू प्रयोग गर्ने जोखिम कम गर्न सम्भव छ। निम्नमा यी उपायहरू वर्णन गरिएको छ।
Multitools संग काम गर्दा, सुरक्षा दस्ताने लुगा लगाउन महत्त्वपूर्ण छ। दस्ताहरू पनि तपाईंलाई चर्को र कटौतीबाट जोगाउँछ स्पार्क, चिप्स वा स्प्लिन्टर्स। यो आवश्यक छ कि सुरक्षा दस्ताने सही फिट र आकार छ। यो ठुलो फिटिंग दस्ताने, जो रबर को सतह को सतह मा पहनने को लागि सबै भन्दा राम्रो छ।
जब बहु-प्रकार्य उपकरणसँग काम गर्दा साथै काठ वा धातु, चिप्स, चिप्स र स्पार्क जस्ता विभिन्न कच्चा पदार्थहरू प्रशोधन गर्दा वरिपरि उड्न सक्छन्। आँसु चाँडै घाइते हुन सक्छ। यसैले यो सुरक्षित चश्मा संग सुरक्षित छ। यो स्क्रिन व्यक्तिगत रूपमा सेट गर्नु पर्छ, त्यसैले यो कुनै पनि पनि ढीलो वा धेरै तंग द्वारा छ। साधारण चगलहरू पोलो कार्बोनेटबाट बनाइएका छन्।
जब सामग्री संग काम गर्दा धूल र विषाक्त धुरीहरू सिर्जना गर्दा सांसद सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। बहु-प्रकार्य उपकरणको साथ काम गर्दा, एयरवेजका लागि सुरक्षा पहनाउनुपर्छ। यो ध्यान दिइन्छ, त्यो न त धेरै बल छ, न त धेरै ढीलो बस्छ र उत्कृष्टता बढाउँछ।
प्रदर्शनमा आधारित यो सम्भव छ कि बहुविध प्रकार्य उपकरण धेरै शोर हुन्छ। यदि यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ भने, वरदानमा उच्च आवाज दबाबको निरन्तर असर हानिकारक छ। यसले अपरिहार्य र स्थायी सुनको क्षति निम्त्याउन सक्छ। यो एक धेरै उच्च गुणस्तर सुनुवाई संरक्षण प्रदान गरेर विरोध हुनुपर्छ। एक कान संरक्षण यहाँ सिफारिस गरिएको छ, जुन व्यक्तिगत रूपमा समायोजन कोष्ठक मा समायोजित गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि सुनुवाई सुरक्षा कुनै पनि नराम्रो हो र नराम्रो होइन।
मल्टी-प्रकार्य उपकरणको साथ गतिविधिको दौरामा सिर स्पार्क्स, चिप्स, काठ वा धातु चिप्सले चोट नगर्ने निश्चित गर्न, यो हेलमेटसँग लैजान आवश्यक छ। सुरक्षा हेलमेट बिल्कुल ठीक हुनुपर्छ, प्रेस नगर्नुहोस् र कुनै पनि माध्यम पनि ढीलो हुन सक्दैन। यो महत्वपूर्ण छ कि चश्मा को कोष्ठक तल राखिएको छ।
थप सुरक्षा निर्देशनहरू
कामको लागी, काम कपडा वा पुरानो लुगा लगाउन सिफारिस गरिन्छ। म्यानुअल कार्य अघि बहुभाषी उपकरण कार्यक्षमताको लागि जाँच गरिनु पर्छ। सञ्जाल-जोडिएको उपकरणको अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि केबललाई क्षति नगर्ने। यो कुनै पनि मामला मा एक स्टकलिंग ब्लक हुनु हुँदैन। यो आत्म-स्पष्ट छ कि केवल एक सरल र स्वस्थ राज्य प्रयोग गरिन्छ।
मल्टि-फंक्शन उपकरण, ट्याकिलाइफ टर्निंग टूल, लचिलो शाफ्ट र मल्टीप्रो कीलेस चकको साथ, accessories० सामान र attach संलग्नकहरू, १०--80-4२,००० आरपीएम रचनात्मक परियोजनाहरू वा DIY कार्यको लागि
चाहे काटाई, काँटछाँट गर्ने, पिसाउने, स्क्र्याप गर्ने, मिल गर्ने, काट्ने, ट्रिम गर्ने वा रास्पि ... गर्ने ... यी सबै सम्भावित अनुप्रयोग परिदृश्यहरू केवल एउटा बहुफँक्शनल उपकरणको साथ गर्न सकिन्छ।
समायोज्य गति र ON / OFF स्विच सटीक र नियन्त्रण गरिएको सञ्चालनको लागि उपयुक्त छ। 10,000 rpm / min - 32,000 rpm सँग लगातार चर कम्पन प्रिन्च्युसन कम्पन प्रति मिनेट सामग्री उपयुक्त कार्यका लागि
शक्तिशाली 135 वाट अधिकतम कटाई गतिको लागि उच्च प्रदर्शन मोटर, तपाईंलाई चाँडै जागिरहरू प्राप्त गर्न सक्षम पार्छ
थप सुरक्षात्मक आवरण स्पार्कहरू विरुद्धको सुरक्षा र अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। 80 सामानहरू र4अनुलग्नकहरूको लागि विभिन्न सामानहरूको द्रुत र सजिलो परिवर्तन
वितरणको क्षेत्र: रोटरी उपकरण, उपकरण केस, सामान (सहायक ह्यान्डल, कट, सुरक्षात्मक हुड, लचिलो शाफ्ट), म्यानुअल
बहु-समारोह उपकरण, TECCPO 200W मोड टेलिस्कोपिक आर्म र टेबल क्ल्याम्पको साथ, १२० सामानहरू सहित, मिनी ड्रिल + + अधिकतम चर गतिसँग, DIY सिर्जना - TART120P प्रदर्शनको लागि आदर्श
Ful शक्तिशाली २००W मल्टि फंक्शन मोटर】 - अधिक शक्तिशाली २०० डब्ल्यू शुद्ध तामाको मोटरले सुसज्जित, + + अधिकतम १०,००० देखि ,200०,००० आरपीएम मा वेग परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईं काटि,, काँटछाँट गर्ने, काट्ने, नक्काउने, काम गर्ने, चमकाउने र काट्ने इष्टतम गति छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। मल्टि फंक्शनले DIY सिर्जनाको लागि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
Applications अनुप्रयोगहरूको फराकिलो दायरा】 - Dremel सामान संग संगत। १२० सामानहरू एउटा सानो प्लास्टिकको बक्समा आपूर्ति गरिन्छ, थप high उच्च प्रदर्शन सामानहरू: टेलिस्कोपिक आर्म र टेबल क्ल्याम्प, लचिलो शाफ्ट, सुरक्षात्मक ढाल, तीन-जबडा चक, शार्पनिंग गाईड, तपाईंको बिभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र कामको लागि थप विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ।
【ओभरलोड सुरक्षा】 - कुशल तातो खपतको लागि बाह्य हनीकम्ब एयर इनलेट्स। ईन्जिन क्षति रोक्न, ईन्जिनको जीवन विस्तार गर्न र व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्निहित ओभरहिटिंग सुरक्षा। दुर्घटनात्मक स्पर्शलाई रोकथाम गर्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरू गरेपछि लक लक शाफ्ट थिच्न सम्भव छैन।
Use प्रयोग गर्न सजिलो र आरामदायक】 - नरम TPE रबर सामग्रीको साथ, TECCPO बहु उपकरणले आरामदायी र उपयोगी ह्यान्डल प्रदान गर्दछ र स्थिर र सुरक्षित प्रयोगमा योगदान गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग सटीक काम वा भारी कामको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
Years २ बर्षको गुणात्मक वचन】 -१ x TECCPO २००W TART2P बहु-समारोह उपकरण, १२० x सामानहरू, १ x दूरबीन आर्म र टेबल क्ल्याम्प, १ x तीन-जबडा चक, १ x पारदर्शी सुरक्षात्मक ढाल, १ x शार्पनिंग गाइड, १ x काट्ने गाईड, १ x अतिरिक्त ह्यान्डल, १ x लचिलो शाफ्ट, १ xRobuster उपकरण बक्स, १x निर्देशन पुस्तिका।
TROTEC 4420000101 PMTS 10-230V मल्टिफंक्शन उपकरण द्रुत रिलीज प्रणालीको साथ, 300W मोटर, विस्तृत सामान सेट, यातायात केस प्रदर्शन
यस पावर प्याकको साथ तपाइँ तपाइँको परियोजना सिधा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ - प्लग इन र जानुहोस्। पीएमटीएस १०-१२VV को मानक नरम सुरुवातले यसको शक्तिशाली W०० डब्लू मोटरको सहज सुरुवात सुनिश्चित गर्दछ, जसले सब भन्दा माग गर्ने कार्यहरूलाई पनि चरणको बाहिर राख्दैन। एक पटक स्विच गरेपछि, यो स्थायी रूपमा र विश्वसनीयताका लागि प्रति मिनेट २१,००० पटकसम्म आउँदछ - कुनै पनि समयमा सम्बन्धित सामग्री र अनुप्रयोगमा इष्टतम समायोजनको लागि निरन्तर समायोज्य।
व्यावहारिक प्लग अपरेशनको कारण, PMTS १०-२10V अधिक समय उपभोक्ता नवीकरण कार्यको लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छ, किनकि तपाईंले बहु-प्रकार्य उपकरण प्रयोग गर्दा ब्याट्री क्षमतामा ध्यान दिनु पर्दैन। थप रूपमा, एसी पावरलाई धन्यवाद, काठ, धातु, प्लास्टिक वा सिरेमिक जस्ता सामग्रीहरूको विस्तृत विविधता सबै सजीलो प्रक्रियाको प्रक्रियाको साथ द्रुत गतिमा गर्न सकिन्छ। 230.२ डिग्री को ठूलो दोलन कोण सटीक काम सुनिश्चित गर्दछ।
ताकि तपाईं ध्यान केन्द्रित र थकान मुक्त तरिकामा PMTS १०-२10V का साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ, यो बहु-प्रकार्य उपकरणको डिजाईन गर्ने क्रममा एर्गोनोमिक डिजाइनमा विशेष जोड दिइयो, त्यसैले यो उपकरण, जुन सजिलो पहुँचको भित्र डिजाइन गरिएको छ, हातमा धेरै राम्रो छ। एक केन्द्रीय सफ्टग्रिप सम्मिलित इष्टतम पकड प्रदान गर्दछ र राम्रो सोच विचार स्विच व्यवस्था कंपन को संख्या को निरन्तर समायोजन संग लचीला एक हात संचालन सक्षम गर्दछ।
यदि संलग्नक परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने, यो द्रुत रिलिज प्रणालीको प्रयोग गरी द्रुत र सजिलैसँग PMTS 10-230V मा गर्न सकिन्छ। केवल क्ल्याम्पि le लीभर तान्नुहोस्, उपकरण बिनाको एट्याचमेन्ट परिवर्तन गर्नुहोस् र १२ सम्भावित कार्य दिशाहरू मध्ये कुनै एकमा यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।
वितरणको स्कोप: १ x मल्टिफंक्शनल उपकरण पीएमटीएस १०‑२1०V, १ एक्स स्क्र्यापर एचसीएस एससी /०/10० (टाइल चिपकने, सिलिकॉन, मोर्टार र पेन्ट अवशेष हटाउनका लागि), १ x खण्ड ब्लेड एचएसएस एसएम / 230/२० (काठ र धातुको लागि), १ x डुबकी काटिएको ब्लेड BIM सीएस / 1/२80 wood (काठ, प्लास्टिक, GRP, प्रकाश र अलौह धातु) को लागी, १ x डुबकीले ब्लेड HCS CS / / / (० (काठ, प्लास्टरबोर्ड र नरम प्लास्टिकको लागि), १ x डेल्टा स्यान्डिंग प्लेट, १२ x Velcro sanding triangles for काठ, 30 x Velcro स्यान्डिंग त्रिकोणमा धातु, १ एक्स सम्मिलित केस
बॉश मल्टीफंक्शन टूल PMF 350 CES (350 वाट, स्टारलॉक र स्टारलॉक प्लस एक्सेसरीजको लागि, केसमा) प्रदर्शन
घर सुधारको लागि शक्तिशाली अउलराउन्डर चाहे मिलि sc, स्क्र्यापिंग, सोरिंग, काटि cutting्ग, काँटछाँट गर्ने, पिस्ने वा लुकाउने, सामानहरूको ठूलो दायराका लागि धेरै अनुप्रयोगहरू सम्भव छ धन्यवाद।
इष्टतम निर्देशनको लागि4गहिराइ रोक्न र विरोधी-कंपन पकड़को साथ कटाई गहिराई राख्नु
180 डिग्री लाईट ब्यान्ड र कम-डस्ट पीसिंगको कारण कार्य क्षेत्रको इष्टतम रोशनी एक वैक्यूम क्लीनर एडाप्टरको माध्यमबाट धन्यवाद
स्वत: पावर ट्राफिक र सजिलो उपकरणको लागि ओटोसील प्रणाली मार्फत परिवर्तनको लागि तारालक इन्टरफेसको साथ
आपूर्ति को स्कोप: PMF 350 CES, खण्ड ब्लेड ACZ 85 EB डाइभिङ ब्लेड AIZ 32 ईपीसी डाइभिङ ब्लेड PAII 65 APB, डेल्टा sanding प्लेट AVZ 93 जी,6पीसी देखे। स्यान्डिंग पेपर सेट, एन्ट-कंपन ग्रिप, 4-गहिरो रोक, धूल निष्कर्षण, केस (3165140828567)
मल्टि-फंक्शन टूल, ter 170 सामानहरू (२ क्युलेट्स -२. / / 83.२ मिमी) को साथ मिटर १ 2० डब्लु टर्निंग टूल, vari भेरिएबल स्पीड सेटिंग्स, मिलिंग, काटि ,्ग, ग्राइन्डिंग र एग्रेभिंगका लागि बहु-उद्देश्य ग्राइन्डिंग मेशिन
Spe गति सेटिंग: मीटर अधिक मल्टिफंक्शन उपकरण अधिक शक्तिशाली १ 6० डब्लु मोटर संग सुसज्जित छ, तपाईं ,०००- speed170,००० आरपीएम देखि needs वेरिएबल स्पीड तपाईको आवश्यकता अनुसार कटौती, सोरिंग, ट्रिमिंग, ग्राइन्डिंग र नक्काशीको लागि इष्टतम गति छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यावहारिक उपकरण भण्डारण बक्स: प्लास्टिक उपकरण भण्डारण बक्स मजबूत, ड्रप प्रूफ र आर्द्रता प्रतिरोधी छ, बोक्नको लागि सजिलो छ र ह्या hang अप। सबै भागहरू क्रमबद्ध र पूर्ण छन्, राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको छ बिखार र गडबडबाट बच्न।
उपयोगी सामानहरू थप्नुहोस्: दुईवटा क्युलेटहरू (२.2,3 मिमी र 3,2.२ मिमी) र सबै प्रकारका प्लास्टिक र काठ मार्फत ड्रिलिंगका लागि बनाइएको ड्रिलहरू। भारी सामग्री पोसि। गर्न र हटाउन डिस्कहरू महसुस गर्नुहोस्।
आरामदायी ह्यान्डलि:: नायलॉन सामग्रीको साथ, मीटरिक मल्टिफंक्शन उपकरणले आरामदायक र उपयोगी ह्यान्डल प्रदान गर्दछ र स्थिर र सुरक्षित प्रयोगमा योगदान गर्दछ। सटीक काम वा कुनै नराम्रो कामका लागि तपाई यसलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ।
वितरणको स्कोप र २ 24-महिना ग्यारेन्टी: १ x मीटरको मल्टिफंक्शन उपकरण, १ x सहायक ह्यान्डल, १ x लचीला शाफ्ट, x x x सामानहरू, १ x उपकरण केस, १ x उपयोगकर्ता पुस्तिका, १ x २--महिना ग्यारेन्टी कार्ड। [इमेल सुरक्षित]
डेडल्ट बहुउपकरण उपकरण युनिवर्सल DWE315KT - एक यन्त्रमा ग्रिन्डर, देखा, स्पट्युला र यूटिलिटी चाकू - Case with Oscillating Tool - 37-टुकडा उपकरण सेट - 300 प्रदर्शन
बहुभाषी उपकरण सेटले केवल एक उपकरणको साथमा प्यासिंग, हेर्ने, भरने र धेरै अधिक अनुमति दिन्छ - छिटो, उपकरण-मुक्त उपकरणको परिवर्तन!
राम्रो विचार-विचार-आउट कार्यक्षमता संग अविश्वसनीय शक्ति: बहु उपकरण सेट यसको शक्तिशाली 300W इन्जिन र असीमित चर गति संग काम गर्दछ - काम मा पूर्ण एकाग्रता को लागि!
सुविधाजनक: प्रतिस्पर्धात्मक सामानका लागि उत्कृष्ट बिरुद्ध र ग्रिड ergonomics / द्रुत-परिवर्तन उपकरण र सहायक एडेप्टरको साथ हात बहुविध उपकरण - सहज प्रतिस्थापनका लागि।
उत्तम दृश्यात्मकता - अन्धकारमा पनि: उज्ज्वल एलईडी प्रकाशले कार्यस्थललाई आदर्श रूपमा प्रस्तुत गर्दछ र धूल निष्कर्षलाई धूल मुक्त पीस र स्वच्छ काम गर्न अनुमति दिन्छ।
वितरणको स्कोप: १x उपकरण मल्टिटुल, गहिराइ स्टप, हेक्सागन कुञ्जी, २ sa सेन्डि papers कागजातहरू, स्यान्डिंग प्लेट, spatula, xx सेरे ब्लेड, उपकरण बक्स, सहायक एडाप्टर /--वर्ष ग्यारेन्टी *
Einhell मल्टिफंक्शनल उपकरण TE-MG 300 EQ (300 W, गति र स्थिर इलेक्ट्रोनिक्स, सहित सॉ ब्लेड चयन, स्यान्डपेपर, स्क्रेपर, यातायात केस सूचक)
उच्च प्रदर्शन प्रदर्शनको लागि एक शक्तिशाली 300 वाट मोटर।
सुविधाजनक र उपकरण-रहित सहायक परिवर्तनको लागि द्रुत-रिलीज लक र चुम्बकीय उपकरण धारक। बारम्बार समायोज्य उपकरण धारक। नरम पकड़ द्वारा सुरक्षित र आरामदायक काम।
सामग्री र अनुप्रयोग-आधारित कामको लागि स्पीड इलेक्ट्रोनिक्स। निरन्तर इलेक्ट्रनिक्सको कारण उच्च लोडमा गतिको कुनै हानि छैन।
उपकरण-रहित धूल निष्कर्षण उपकरण र व्यावहारिक धूल निष्कर्षण एडाप्टर सहित।
सहित HCS र BIM-प्रवेश ब्लेड देखे, 2x Segmental, एक खुरचनी, एक त्रिकोणात्मक sanding थाली, व्यावहारिक परिवहन र भण्डारण मामला मा6घर्षण कागजात
बॉश मल्टीफंक्शन टूल PMF 220 सीई (220 वाट, स्टारलॉक एक्सेसरीजको लागि, केसमा) प्रदर्शन
बहुभाषी उपकरण PMF 220 सीई - तपाईंको लचीला सहायक
व्यापक सामानको लागि बहुमुखी कामको लागि धन्यवाद: मिलिंग, स्क्रैपिंग, भिसा, काटन, काटन, पीसने, पोलिश
4 चरणबद्ध गहिराई रोक्नको लागि सही कण गहिरो धन्यवाद
इभरतम पावर ट्राफिक र सजिलो उपकरणको लागि विश्वव्यापी पेंचको साथ ताराङ्कक इन्टरफेसको साथ
आपूर्ति को स्कोप: PMF 220 इस्वी संवत्, खण्ड ब्लेड ACZ 85 EB डाइभिङ ब्लेड AIZ 32 ईपीसी, डेल्टा sanding प्लेट AVZ 93 जी,6पीसी देखे। Schleifpapierset, 4-चरण गहिराई रोक, एलन कुञ्जी, मामला (3165140828482)
मल्टीफंक्शन उपकरण, १W० डब्लु मल्टिफंक्शन उपकरण जिनोर बहुउद्देश्यीय ग्राइन्डर speed गति सेटिंग्स मोडि Turn उपकरण १० tool सामानको साथ सेट गरियो
Power सुपर पावर】 १ W० W मोटरले तपाईंलाई एक कडा र स्थिर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, जुन काट्ने, मिलिंग गर्ने, पिसाउने, काटने, ड्रिलिंग, सफा गर्ने, चमकानेका लागि उत्कृष्ट छ। जिनोरबाट बहु-प्रकार्य उपकरणहरूले तपाईंको विचारहरू साकार गर्न असीमित संख्यामा सम्भावनाहरू समावेश गर्दछ
आर्बिट्स समायोज्य कार्य गति】】 गति सेटिंग्स, बहु-कार्य उपकरण 7००० देखि ,8.000 35.000,००० आरपीएममा चल्दछ। कम्पन र गति को नियन्त्रणको साथ, तपाईं उपकरणको कार्य गति अलग सामग्रीमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ
Tensive विस्तृत सामानहरू】 बहु-समारोह उपकरण १० multi बहु-उद्देश्ययुक्त सामान र additional अतिरिक्त सामानहरू सहित सुसज्जित छ, जुन छिट्टै संलग्न गरी हटाउन सकिन्छ। जिनोरले तपाईंलाई २ 105-महिना ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। हामीसँग तपाईंको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन हामी खुसी छौं।
【त्रि-आयामी तातो dissipation डिजाइन】 बहुउद्देश्यीय ग्राइन्डरसँग धेरै गर्मी लंपटता उद्घाटन हुन्छ, जसले ताप र चाँडै प्रभाव पार्दछ र उपकरणको जीवन विस्तार गर्दछ।
【मानवीय डिजाइन】 एर्गोनोमिक ह्यान्डल गैर-पर्ची सामग्रीले बनेको हुन्छ जसले एक सुरक्षित र आरामदायक ग्रिप प्रदान गर्दछ
परीक्षण सल्लाह बहुविध उपकरणहरूको लागि
अर्को लेखग्रिल क्लीनर